Ota Wadhi Tsika Yeruzivo Ruzivo Pepa "ART nyuchi HIVE" vol.6 + nyuchi! | Ota Ward Tsika Yokusimudzira Sangano
Yakabudiswa Gumiguru 2021, 4
vol. 6 Nyaya yemuchirimo
Pamwe chete nemutori wenhau wadhi "Mitsubachi Corps" yakaunganidzwa nekutora pachena, isu tichaunganidza ruzivo rwehunyanzvi uye kuendesa kune wese munhu!
Feature chinyorwa: Denenchofu, iro guta rakarotwa naEiichi Shibusawa + nenyuchi!
Sezvo isina kugadzirwa, iwe unogona kuona zvakasununguka zviroto zvako.
"VaTakahisa Tsukiji, Curator weOta Ward Folk Museum"
Denenchofu inofananidzwa nenzvimbo dzakakwirira dzekugara muJapan, asi yaimbova nzvimbo yekumaruwa inonzi Uenumabe neShimonumabe.Izvo zvaive kubva pakurota kwemurume kuti nzvimbo yakadai yakaberekwazve.Zita remurume uyu ndiEiichi Shibusawa.Panguva ino, takabvunza VaTakahisa Tsukiji, muchengeti weOta Ward Folk Museum, nezvekuzvarwa kwaDenenchofu.
Denenchofu yaive nzvimbo yakaita sei munguva yakapfuura?
"Munguva yeEdo, misha yaive chikamu chevanhu. Ruzhinji rwemisha yeUenumabe Village uye Shimonumabe Village ndiyo inonzi Denenchofu renji. Denenchofu 1-chome, 2-chome, uye nemwaranzi yazvino Shimonumabe iri mu3-chome. Sekutanga kwenguva yeMeiji, huwandu hwevanhu hwaive makumi masere nemakumi masere nesere nenomwe. huwandu hwemhuri hwaive zana nemakumi matanhatu nenomwe. Nenzira, gorosi nezviyo zvakasiyana-siyana zvakagadzirwa, uye mupunga waigadzirwa munzvimbo dzakaderera, asi zvinoita sekunge chikamu cheminda yepaddy chaive chidiki munzvimbo ino, kunyanya kurima kumusoro. "
Denenchofu pamberi pekusimudzira Kwakapihwa na: Tokyu Corporation
Chii chakachinja iyo misha ...
"Ini ndiri Eiichi Shibusawa *, anonzi baba vehutungamiriri hweJapan. Pakutanga kwenguva yeTaisho, ndakafungidzira guta rekuJapan rekutanga rebindu rine zvivakwa zvekugara zvakanaka uye zvizere nehunhu.
Kubva pakudzoreredzwa kweMeiji, Japan inosimudzira kukurumidza kwemaindasitiri pasi pemutemo wemasoja akapfuma.Nekuda kweRusso-Japan Hondo uye Hondo Yenyika I, mafekitori akabudirira mune raimbova guta reTokyo (ingangoita mukati meYamanote Line uye kutenderedza Rwizi Sumida).Ipapo, huwandu hwevanhu vanoshanda ipapo huchawedzera zvakatsiga.Mafekitori nedzimba zvakaunganidzwa.Sezvingatarisirwa, iyo nharaunda nharaunda inodzikira.Zvingave zvakanaka kushanda, asi zvakaoma kurarama. "
Shibusawa munhu akakosha munyika yezvemari neyemaindasitiri, asi sei wakapinda mukusimudzira maguta?
"Shibusawa akaenda kunze kwenyika kubva kupera kweshogunate yeTokugawa. Iwe unogona kunge wakaona guta rekune dzimwe nyika ukanzwa mutsauko kubva kuJapan.
Shibusawa akarega basa kubva mukuita basa muna 1916 (Taisho 5).Raive gore rakapfuura apo ini ndakatanga kuve nechekuita mukuvandudzwa kwemaguta emagadheni, uye nguva dzinoenderana.Kurega basa rinoshanda zvinoreva kuti haufanire kusungirwa pazvisungo zvebhizimusi renyika kana indasitiri.Zvinonzi zvakaringana kugadzira rakanakisa risingabatsiri guta risingakoshese hupfumi chete, kana kuti kurega pamudyandigere ndizvo zvezvimwe zvinokonzeresa. "
Nei Denenchofu akasarudzwa senzvimbo yekusimudzira?
"Muna 1915 (Taisho 4), Yaemon Hata, aive secretary waYukio Ozaki, aishanda sa meya weTokyo uye Gurukota rezvemitemo, akashanyira Shibusawa nevanozvipira vemuno ndokukumbira budiriro. Zvaive zvisati zvaitika. Nekuda kwechikumbiro , switch yakavhurwa muShibusawa, iyo yanga ichiziva nezvedambudziko iri kwenguva yakareba. Ndiri kunyatso kuziva nezvebonde. Rural City Co, Ltd. yakavambwa muna 1918 (Taisho 7). "
Denenchofu Chiteshi pakutanga kwekuvandudza Kwakapihwa na: Tokyu Corporation
Ndeipi yaive pfungwa yekuvandudza?
"Ibudiriro senzvimbo yekugara. Inzvimbo yekumaruwa inzvimbo yekugara. Inzvimbo yekumaruwa ine budiriro diki, kuti ugone kuziva zviroto zvako."
Kutanga, ivhu rakakwirira.Usashatirwa.Uye magetsi, gasi, uye mvura zviri kufamba.Kufambisa kwakanaka.Aya mapoinzi ndiwo mapoinzi pakutengesa imba panguva iyoyo. "
Hideo Shibusawa, mwanakomana waEiichi Shibusawa, ndiye achave murume akakosha mukusimudzira chaiko.
"Eiichi Shibusawa akatanga kambani, uye iyo kambani pachayo yaitungamirirwa nemwanakomana wavo Hideo.
Eiichi anodhonza shamwari dzakasiyana siyana kubva kune bhizinesi nyika kuti vatange kambani, asi vese zvavo vatove mapurezidhendi kumwe kunhu, saka ivo havabatanidzwe mubhizinesi izere-nguva.Nekudaro, kuti ndinyatso tarisisa kuvandudzwa kweguta reguta, ndakawedzera mwanakomana wangu Hideo. "
Hideo akashanyira nyika dzekuMadokero kusati kwaitika chaiko.
"Ndakasangana neSt. Francis Wood, guta rekumaruwa kumucheto kweSan Francisco." Denenchofu "akafananidzwa neguta rino. Pamusuwo weguta, segedhi kana chivakwa. Pane chivakwa chechiteshi munzvimbo iyi, uye iyo migwagwa yakarongedzwa nenzira yakatwasuka yakanangana nechiteshi.Izvi zvakare zvinozivikanwa nezveParis muFrance, uye zvinonzi chivakwa chechiteshi chinoita seanokunda suo rekudzoka.Tsime razvino Iyo rotary nayo iri zvakare kubva pakutanga kwekuvandudza. .
Zvivakwa zveMadokero zvakavakwa zvakare neguta rekune dzimwe nyika mupfungwa.Nekudaro, kunyangwe iyo yekunze iri yekuWestern-dhizaini, paunopinda mukati, zvinoita sekunge paive nemitauro yakawanda yeJapan-Western, senge matatami mats, uko mhuri yekumashure inodya mupunga panguva yekumadhirowa-dhizaini yekudyara.Paive pasina akawanda akawanda madhiri ekuMadokero.Mararamiro eJapan haasati achinja. "
Zvakadii nezvehupamhi hwemugwagwa?
"Hupamhi hwemugwagwa mukuru ndewemamita gumi nematanhatu. Handifunge kuti zvinoshamisika izvozvi, asi zvakafara panguva iyoyo. Miti yemumugwagwa irikugadzirawo nguva. Zvinotaridza kuti miti iyi ine ruvara uye 13-chome yese. rinotaridzika kunge shizha reginkgo. Zvakare, huwandu hwenzira, nzvimbo dzakasvibira nemapaki i3% yenzvimbo dzekugara. Izvi zvakanyanyisa kukwirira. Kunyangwe pakati peTokyo panguva iyoyo, ingangoita gumi Nekuti inenge%. "
Panyaya yemvura netsvina, yakanga yafambiswa mberi panguva iyoyo yandainyatsoziva nezve tsvina.
"Ini ndinofunga ndizvozvo. Hazvina kutora nguva Ota Ward pachayo yakwanisa kunyatso chengetedza sewagege system. Munguva yakapfuura, mvura yakasviba yemumba yakadirwa mumugwagwa wekare weRokugo Aqueduct. Inonzi sewerage network yakagadzirwa. mumashure. Ndinofunga ndeya40. "
Zvinoshamisa kuti paive nemapaki nematare etenisi sechikamu chekusimudzira kwemaguta.
"Horai Park neDenen Tennis Club (yakazonzi Denen Coliseum). Horai Park yakasiya nzvimbo yaimbove nzvimbo yekumaruwa muchimiro chepaki. Sango rakasarudzika rakadai raive munzvimbo yese yeDenenchofu, asi budiriro yedhorobha Ipapo, kunyangwe iri "inonzi guta rekumaruwa, zvisaririra zvekutanga zveMusashino zvinonyangarika. Ndosaka iyo Denen Coliseum yakavhura zvakare nzvimbo yaive nhandare ye baseball senhandare huru yeDenen Tennis Club."
Wepamusoro maonero eTamagawadai enzvimbo yekugara Yakapihwa na: Ota Ward Folk Museum
Ndiro guta rine zviroto zvazoitika.
"Muna 1923 (Taisho 12), Kudengenyeka kwenyika kukuru kweKanto kwakarova uye nzvimbo yeguta yakaparadzwa.Dzimba dzaive dzakazara uye moto wakapararira uye wakakonzera kukuvara kukuru.Dzimba dzakazara nemarara dzine njodzi, saka ivhu rakagadzikana panzvimbo dzakakwirira, uye simba rekugara mumusha wakapamhama wawedzera.Icho chichava muswe wemhepo, uye Denenchofu ichawedzera huwandu hwevagari kamwechete.Mugore rimwe chete, chiteshi che "Chofu" chakavhurwa, uye muna 1926 (Taisho 15) chakatumidzwa zita rekuti "Denenchofu" chiteshi, uye Denenchofu akazvarwa muzita nemuzvokwadi. "
Mutariri weOta Ward Folk Museum.
KuMuseum, ari pamusoro pezvekutsvagisa, kutsvagisa, uye mapurojekiti ekuratidzira ane chekuita nezvakaitika kare, uye ari kunetsekana mazuva ese kuendesa nhoroondo yedunhu kunharaunda yemuno. Yakaonekwa pachirongwa chakakurumbira cheNHK "Bura Tamori".
Chidimbu kubva "Aobuchi Memoir" naEiichi Shibusawa
"Hupenyu hwemumaguta hauna zvinhu zvehunhu. Zvakare, iro guta parinowedzera, zvinhu zvehunhu zviri kushomeka muhupenyu hwevanhu. Nekuda kweizvozvo, haringori chete nekukanganisa hunhu, asiwo munyama. zvinokanganisa hutano, zvinokanganisa zviitiko, kutadza kwepfungwa, uye kunowedzera huwandu hwevarwere vane kushaya simba kwendangariro.
Vanhu havagone kurarama vasina zvisikwa. (Yasiiwa) Naizvozvo, "Guta Guta" ranga richisimukira muBritain neUnited States kwemakore angangoita makumi maviri.Kuti zvitaurike, iri gadheni guta iguta rinobatanidza zvakasikwa, uye iguta rine hupfumi hwekumaruwa kuravira uko kunoratidzika kunge kuri kuwirirana pakati pemaruwa neguta.
Kunyangwe pandinoona Tokyo ichikura padanho rinoshamisa, ndinoda kugadzira chimwe chinhu chakafanana neguta rebindu munyika yedu kugadzirisa zvimwe zvezvikanganiso muhupenyu hwemumaguta. ".
"Bindu Guta Ruzivo Pepahlero" panguva yekutengesa
Muguta redu rebindu, isu tichazotarisa kunzvimbo yekugara-yekirasi yekugara inoenda kufekitori hombe inonzi Tokyo Guta.Nekuda kweizvozvo, isu tiri kutarisira kuvaka inoyevedza nyowani yekugara nzvimbo mumasabhabhu ane huwandu hwakanyanya hwehupenyu.
Maguta emagadheni muJapan akaganhurirwa nekuvakwa kwedzimba chete, uye sekureba sekuvharwa kwenzvimbo, iyo nzvimbo iyo imba yakavakwa inofanira kuzadzisa zvinotevera zvinodiwa.
(XNUMX) Ita kuti pasi riome uye rive risina mhepo mhepo.
(XNUMX) Iyo geology inofanirwa kuve yakanaka uye panofanirwa kuve nemiti yakawanda.
③ Iyo nharaunda inofanira kuve inosvika zviuru zana tsubo (ingangoita 10 mativi emamita).
④ Iva nezvifambiso zvinokutendera kuti usvike pakati peguta mukati meawa.
⑤ Pedzisa teregirafu, runhare, mwenje, gasi, mvura, nezvimwe.
⑥ Kune zvivakwa zvakaita sezvipatara, zvikoro, uye makirabhu.
⑦ Iva nenzvimbo dzekudyidzana senge mubatanidzwa wevatengi.
Hideo Shibusawa zano rekutanga
Yekufananidzira chivakwa chechiteshi
Concentric denderedzwa radiation radiation
Hupamhi hwemugwagwa (trunk mugwagwa 13m, mashoma 4m)
18% yemigwagwa, nzvimbo dzakasvibirira, uye mapaki
Kuiswa kwemvura uye tsvina
① Usavake zvivakwa zvinogona kunetsa vamwe.
(XNUMX) Kana chipingamupinyi chichifanira kupihwa, chichava chakanaka uye chakanakisa.
③ Chivakwa chichava panhurikidzwa yechitatu kana pasi.
④ Nzvimbo yekuvakira ichave iri mukati meXNUMX% yenzvimbo yekugara.
⑤ Iyo nhambwe iri pakati petambo yekuvaka nemugwagwa ichave 1/2 yehupamhi hwemugwagwa.
⑥ Mari yeruzhinji yeimba yacho ichave zana nemakumi maviri ema yen kana kupfuura pasubo imwe neimwe.
Zvitoro zvichaiswa padyo nechiteshi chakasiyana nenzvimbo yekugara.
⑧ Kugadzwa kwemapaki, mapaki ekuzvivaraidza uye makirabhu.
Yakapihwa naEiichi Shibusawa: Yakadhindwazve kubva paNational Diet Library webhusaiti
Akazvarwa muna 1840 (Tenpo 11) kuimba yepurazi iriko muChiaraijima, Fukaya City, Saitama Prefecture.Mushure meizvozvo, akazova mutongi wemhuri yeHitotsubashi ndokuenda kuEurope senhengo yemamishinari kuParis Expo.Mushure mokudzokera kuJapan, akakumbirwa kushandira hurumende yeMeiji. Muna 1873 (Meiji 6), akarega basa kubva kuhurumende ndokutendeukira kune bhizinesi renyika.Yakabatanidzwa mukugadzwa uye manejimendi emakambani anodarika mazana mashanu nemasangano ezvehupfumi akadai seDaiichi National Bank, Tokyo Stock Exchange, uye Tokyo Gasi, uye iri muzvirongwa zvinopfuura mazana matanhatu zvemagariro. Reverera "dzidziso yehunhu yekubatanidza dzidziso".Basa guru "Dzidziso uye Arithmetic".
Architecture inopa rukudzo kune zvakasikwa
"Architect Kengo Kuma"
Kengo Kuma, mugadziri anobatanidzwa mukugadzirwa kwezvivakwa zvakawanda kumba nekukunze, senge National Stadium, JR Takanawa Gateway Station, Dallas Rolex Tower muUnited States, Victoria & Albert Museum Dundee Annex muScotland, naOdung Pazar Museum of Yemazuva ano Art muTurkey.Izvo zvivakwa zvichangobva kugadzirwa naVaKuma "Denenchofu Seseragikan" yakavhurwa muDenenchofu Seseragi Park.
Kuonekwa kwepanoramic kwaDenenchofu Seseragikan, iyo yakafukidzwa zvizere negirazi uye iine kunzwa kwekuvhurika ⓒKAZNIKI
Ini ndinofunga chiito chekufamba pachezvayo chine chirevo chakapfuma.
Ndakanzwa kuti VaKuma vakapinda chikoro chekireshi / chepuraimari muDenenchofu.Une zviyeuchidzo nezve ino nzvimbo?
"Ndakaenda kuDenenchofu kukireshi uye kuchikoro chepuraimari kwemakore mapfumbamwe. Panguva iyoyo, ini ndaive ndisiri muchivakwa chechikoro chete, asi ndichimhanyawo ndichitenderedza mataundi akasiyana siyana, mapaki, nzizi, nezvimwe. Chaizvoizvo, rwendo urwu rwakanyanya kutenderedza. rwizi rweTama.Zvaive zvakawanda.Ndangariro dzangu dzehudiki dzakanyanya munzvimbo ino.Hapana chete paki yekuvaraidza yeTamagawaen yaive panzvimbo yeSesarigi Park yazvino, asi zvakare Tamagawadai Park uye Chechi yeKaturike yeDenenchofu iyo ichiripo. kunge ndaikura nerwizi Tama, pane kungotenderedza nzvimbo ino. "
Basa racho raive sei panzvimbo yekurangarira?
"Ini ndaifunga kuti chirongwa ichi pachacho chainakidza kwazvo. Ini ndinofunga nezvepaki uye dhizaini seimwe. Hazvisi zvekuvakwa chete iyo raibhurari / musangano wekusangana ... Pfungwa yekuti ipaki ine mabasa eraraibhurari / musangano Mukuvakwa kweveruzhinji, iyo dhizaini pachayo ine basa, asi zano raVaOta Ward raive rekuti paki yaive iine basa.Pfungwa yekuve muenzaniso wemapurani eruzhinji mune ramangwana uye nenzira inofanira kunge iri guta. kurudyi. VaOta-ku vane zano repamberi, saka ndanga ndichida kutora chikamu. "
Kugadzirwa kwechivako chitsva, Seseragikan, kuchachinja zvinoreva uye mashandiro enzvimbo nenzvimbo.
"Seseragikan inosanganisirwa nedombo riri pedyo nerwizi runonzi bhurasho (rwizi rwekoko) pamberi peizvi. Kune nzira pasi pebrashi, uye pane nzvimbo yaunogona kufamba-famba. Panguva ino," Seseragikan " Ini ndinofunga kuti kuyerera kwevanhu mupaki nenzvimbo ino kuchachinja nekuda kweizvi, uye chiito chekufamba pachako chichava neupfumi zvinoreva kupfuura pakutanga. "
Nekugadzwa kweSeseragikan, zvingave zvakanaka kana vanhu vazhinji vangangoda kupinda.
"Ini ndinofunga zvichanyatso kuwedzera. Ini ndinonzwa kuti chiitiko chekufamba uye chiitiko chekunakidzwa nenzvimbo chichaitwa sehumwe. Nenzira iyoyo, chivakwa cheveruzhinji chivakwa uye nzira iyo nharaunda inofanira kunge iri yakati siyanei zvishoma. Ini ndinonzwa "kuti mhando nyowani yakadaro, umo zvivakwa zveruzhinji pachazvo zvinoshandura kuyerera kwevanhu munharaunda, zvingangozvarwa pano."
Kunzwa kupora sekugara pasofa mumba yekutandarira
Denenchofu Seseragikan (Mukati) ⓒKAZNIKI
Ndokumbira utitaurire nezve dingindira uye pfungwa iwe yawakarongera iyi yekuvakisa.
Chekutanga pane zvese, ndapota tiudze nezve "veranda yedondo".
"Vharanda iri pakati nepakati pesango nekuvakwa. Ndinofunga maJapan akamboziva kuti nzvimbo yepakati yaive yakapfuma uye yainakidza. Muzana ramakore rechi20, nzvimbo yevaranda yakanyangarika zvakaringana. Imba rave bhokisi rakavharwa. "hukama pakati peimba nebindu hwatsakatika. Izvi zvinondiita kuti ndive ndakasurukirwa zvikuru uye ndinofunga ndiko kurasikirwa kukuru patsika dzechiJapan."
Iko kunakidzwa kwekutora mukana wekunze nekunze?
"Ndizvozvo. Neraki, ndakakurira mumba muine vharanda, saka ndichiverenga bhuku pavheranda, ndichitamba mitambo pavheranda, mabhuroko ekuvaka pavharanda, nezvimwe. Ini ndinofunga kuti kana tikakwanisa kudzorera vharanda zvakare, mufananidzo wemaguta eJapan waizoshanduka zvakanyanya. Panguva ino, ndakaedza kuratidza kuziva kwangu nezvedambudziko renhoroondo yekuvakwa. "
Vharanda inzvimbo yakabatana nezvakasikwa, saka zvingave zvakanaka kana tikabata zviitiko zvemwaka.
"Ndinovimba kuti chimwe chinhu chakadai chinobuda. Ndinovimba kuti vanhu vanochishandisa vachauya nezvirongwa zvakawandisa kupfuura zvavanofunga ivo nehurumende."
Kengo Kuma ku "Seseragi Bunko" pane 1st nzvimbo yekuzorora nzvimbo ⓒ KAZNIKI
Ndokumbira utitaurire nezve "muunganidzwa wemaburi epadenga anosanganiswa musango".
"Chivako ichi hachizi chivakwa chidiki, uye chine vhoriyamu yakawanda. Ukachitaura sezvachiri, chichava chakakura uye bharanzi nesango rinenge rakaipa. Naizvozvo, denga rakakamurwa kuita akati wandei. zvidimbu nemitsetse zvakaiswa mudungwe.Ndakafunga nezve chimiro chakadai.Ndinofunga chinonzwa sekunge chanyungudika munzvimbo yakatenderedza.
Muhoro yekugunun'una庇(eaves)Ive eaves vari kukotamira vakananga kudondo.Architecture inopa rukudzo kune zvakasikwa (kuseka). "
Iyo yekumusoro padenga inogadzira mhando yekukwirira munzvimbo yemukati.
"Mukati mepakati, siringi yakati rebei kana yakadzika, kana pamusuwo, zvinoita sekunge nzvimbo yemukati iri kukanganiswa nekunze. Nzvimbo dzakasiyana dzakasikwa. Ndiyo imwe nzvimbo yakatambanudzwa seyakazara. Mukati, "unogona kunyatsoona mhando dzakasiyana dzenzvimbo. Ini ndinofunga zvakasiyana neyakajairika zvivakwa zvakagadzirwa nebhokisi."
Ndokumbira utitaurire nezve "imba yekutandarira muguta rizere nekudziya kwehuni".Iwe unoti iwe unonyanya kufunga nezvehuni.
"Panguva ino, ndiri kushandisa vintage huni pakati pehuni. Ndiri kuda kuti vese vashandisi vaishandise seimba yavo yekutandarira. Handifunge kuti kune makamuri ekugara akanaka kwazvo ane greenery yakadaro ((Anoseka). Zvisinei , Ini ndaida kuchengeta iyo yekuzorora kunzwa kweimba yekutandarira.Yakaita seimba yekutandarira uko iwe yaunogona kunzwa kukwira kwedenga sezvazviri, kwete mune izvo zvinonzi chivakwa chakaumbwa-sebhokisi chivakwa cheveruzhinji.Ndinovimba ndinogona kuverenga bhuku zvishoma nezvishoma munzvimbo yakanaka, taura neshamwari dzangu, huya pano kana ndaneta zvishoma, uye ndinzwe kupora sekugara pasofa muimba yekutandarira.
Nechinangwa ichocho, diki diki rekare uye rakadzikama rekare zvinhu zvakanaka.Makumi emakore apfuura, pandakanga ndiri mudiki, imba nyowani yakavakwa muDenenchofu.Ndakaenda kunoshanyira dzimba dzeshamwari dzakasiyana siyana, asi mushure mezvese dzimba dzaive dzakakura kudarika idzva nedzakange dzapfuura nguva yacho dzaiyevedza. "
Ndinovimba munogona kunzwa Denenchofu semusha.
Ini ndinofunga maticha emudzidzisi wako ane dingindira rekugarisana nemasikirwo, asi pane here musiyano uripo pakati pekuvakwa mumaruwa zvakasikwa nemasikirwo mumadhorobha akadai seDenenchofu?
"Chaizvoizvo, ndave kutanga kufunga kuti maguta nemumaruwa hazvina kusiyana. Munguva yakapfuura, zvaifungidzirwa kuti maguta makuru aive akatarisana nemaruwa. Denenchofu inzvimbo inozivikanwa yekugara muJapan. Zvisinei, mune pfungwa, ndinofunga inzvimbo huru yekumaruwa. Kunakidzwa kweTokyo ndiko kuti senge muunganidzwa wemisha ine hunhu hwakasiyana. Kwakatangira guta reEdo inzvimbo yakaoma kwazvo. Ine nzvimbo yakaoma yakapetwa yausingawone maguta makuru epasirese, uye kune yakasarudzika tsika pamikoto nemipata yemupendero iwoyo.Kana ukafambisa mugwagwa mumwe kana musango, imwe tsika iri padyo newe.Ndinofunga kuti kusiana kwakadaro ndiyo runako rweTokyo. "kwakasiyana mumhepo munzvimbo yekumaruwa, senge guta kana musha. KuSeseragikan, unogona kunakidzwa nenzvimbo yekumaruwa semusha. Ndinovimba unokwanisa kuinzwa."
Akazvarwa muna 1954.Yakapedzisa iyo Dhipatimendi Rezvivakwa, Yunivhesiti yeTokyo. 1990 Yakagadzwa Kengo Kuma & Associates Architects uye Urban Dhizaini Hofisi.Mushure mekushanda semupurofesa paUniversity yeTokyo, parizvino ari purofesa akasarudzika uye purofesa wezvekusimuka paYunivhesiti yeTokyo.
Ndakakatyamadzwa nenhandare yemukati yeKenzo Tange yeYoyogi iyo yandakaona kumaOlympics eTokyo muna 1964, uye ndinovavarira kuzova mugadziri kubva ndichiri mudiki.Ku yunivhesiti, akadzidza pasi paHiroshi Hara uye Yoshichika Uchida, uye paakange ari mudzidzi akapedza kudzidza, akayambuka Sahara Desert muAfrica, akaongorora misha, uye akananga kunaka uye simba remisha.Mushure mekushanda semuongorori anoshanya kuColumbia University, akatanga Kengo Kuma & Associates mu1990.Akagadzira zvivakwa mumatunhu anodarika makumi maviri (Architectural Institute of Japan Award, International Wood Architecture Award kubva kuFinland, International Stone Architecture Award kubva kuItari, nezvimwewo) uye akagashira mibairo yakasiyana siyana kumba nekune dzimwe nyika.Tichifunga nezvezvivakwa zvinoenderana nemamiriro enzvimbo netsika nemagariro, isu tiri kukurudzira munhu-mwero, munyoro uye munyoro dhizaini.Uye zvakare, kuburikidza nekutsvaga kwezvinhu zvitsva kutsiva kongiri nedare, isu tiri kutsvaga iyo yakanaka fomu yezvivakwa mushure mevanhu vakapfuma.
Remangwana kutarisisa CHIITIKO + nyuchi!
Nguva yemberi kutarisisa CHIITIKO CALENDAR Kurume-Kubvumbi 2021
Ruzivo rweEVENTI runogona kubviswa kana kusendekwa mune ramangwana kudzivirira kutapukira kwehutachiona hutsva hwecoronavirus.
Ndokumbira utarise yega yega kuonana neruzivo rwechizvino-zvino.
Zuva uye nguva
Kubvumbi 4 (Sat) kusvika 17 (Zuva)
Mazuva evhiki 13: 00-18: 00 (Vhura pamazuva evhiki 18: 00-20: 00 kana kumberi kuchengetedza kwakaitwa)
Mugovera neSvondo 11: 00-18: 00
Nguva dzose zororo: Chitatu
Murongi / Kubvunza
5rd Mugovera waMay naNovember gore rega
tsamba / sirivheri / ribhoni
Kubvumbi 6 (Sat) kusvika 12 (Zuva)
Mazuva evhiki 13: 00-18: 00 (Vhura pamazuva evhiki 18: 00-20: 0 kana kumberi kuchengetedza kwakaitwa)